Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – कुरा विश्वकर्म विकास बोर्ड, हाम्रो चिन्हारी, अनि गोर्खा जाती को
Writes: दिपेन्द्र दिप्जो खाती
समस्त गोर्खे सन्तानलाई मेरो सहहृदय अभिवादन, विशेष अभीवादन आफ्नो नामको पछाडी मेरो जस्तै थर र मेरो जस्तै जात लेख्ने सम्पूर्ण विश्वकर्म शन्तातिलाई…
आजको मेरो यो शब्दविल्म्बीहरु विशेषगरी त्यै मेरो जस्तै जात भकोहरु प्रती समर्पित, इन्कित।।
केही वर्ष अघी सम्म गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा हामी सबै गोर्खा भनेर चिनिने गर्थ्येउँ, तर केही समय यता एउटा बिक्राल होड चल्यो, आफूलाई गोर्खा होइन अन्य अरु केइ भनेर चिनाउने, देखाउने । समग्रताको चिनारीलाई कात्रो ओडाइ विखण्डताको नौरन् गर्ने क्रममा गोर्खा सङ्या बिखण्ड हुँदै कोइ लेप्चा, कोइ भोटे, कोइ तामङ्, कोइ लिम्बु, कोइ मगर, आदी आदी हुँदै विभिन्न जातिगत विकास बोर्ड हरुको आवाज हरु उठ्दा, म आफू भने चै गर्व र घमण्ड साथ सोँच्ने र भन्ने गर्दथे “मेरो जातको हरु चाहिँ ऐले सम्म गोर्खा नै छ है”।
तर हिज एउटा खबर पाए… मेरो नाम पछीको गोर्खे जातपनि ऐले अर्कै बनाउने जमर्को गरिन्दैछ हरे । कता हो कुन्नी मेरो दुइचार दाजु भाई हरु आफुलाई गोर्खा भन्न लजाउदै, आफूलाई विश्वाकर्म भनेर चिनाउन अघी लगेको छन् हरे। हिज सम्म अरु जातिय विकास बोर्डको कुरा चल्दा, त्यस्लाई नकार्ने मेरो दाजु-भाईहरु आज त्यतै पट्टी कुद्दैछन् हरे।
“मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन” भन्दै केही दशक अघी सम्म जातिय साम्यवादको कुरा गर्ने हरु आज आफूलाई नै हामी एउटै होइनौं भन्दै अलग्याउने कुरा गर्छन् हरे ।
स्वाभिमानको गुन्द्रीलाई पैंताला मूनि टेकेर, जातिय आरक्षणको टालो ओड्ने मेरो सन्तानलाई त्यतीले पुगेन हरे । अब विकासको बोट चाइयो हरे।
किन हाम्रो बुद्धीको भाडामा बिर्को लाग्दैछ यसरी?? हिज सम्म गोर्खाल्यान्ड मेरो आमा हो भन्ने मेरो दाजु-भाई हरु… आज किन आफ्नै आमा को बलत्कार गर्न जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ?
कहाँ गयो स्वाभिमान? कहाँ गयो त्यो जतिय साम्यवादको सिद्धान्त ?
हिज सम्म अङ्रेजी मा “I am Gorkha and I want Gorkhaland” भन्दै नारा लगाउने मेरो जातको पढेको-लेखेको, जानेको-बूझेको दाजुभाइहरु आज चाहिँ उनीहरुले बोल्ने अङ्रेजीमा “I am not गोर्खा. I am बिस्वकर्मा. I want Biswakarma Development Board” भन्दै हिँडेको देख्दा, म यहाँ एकदेशमापनि लाज र ग्लानीले मर्नु भईराको छु। हजुरहरुलाई केही हुँदैन?
कि बेच्यौ आत्मा नै? चौक बजारको बिचमा निर्वस्त्र उभिएर आफूलाइनै निलामी गर्न किन तम्सेको?
कती जन मेरो दाजु-भाइले “अरु जात ले माँग्यो, हामीपनि माँग्नु पर्छ । यसमा के गलत् छ र?” भन्ने प्रश्नहरुपनि गर्दैछन् । विभाजन हुनुमा गलत् छ । गलत् जातिय विखन्डता आउँदा हाम्रो समग्रता नमवली “गोर्खा” को नाश हुनुमा छ। गलत् कोइ फल्ना, कोइ ढिस्का हुँदा हामी गोर्खा नरहनुमा छ। गलत् त्यै गल्ती गर्नेहरु कै साथमा लाग्नुमा छ। केही वर्ष अघी सम्म एउटै सपना “Gorkhaland for Indian Gorkhas” लाई जात-जातको पिण्डदान दिने क्रममा मेरो जातको दाजु-भाईपनि लागि परेछ। गलत् त्यो गोर्खाल्यान्डको चित सजाउनुमा सहयोग गर्नुमा छ। भिरमा जाने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, तर गलत् अङालेर त्यै गोरु सँग भिरमा जाने मुर्खतामा छ ।
मेरो दाजु-भाईहरु हजुरहरुमा अलिकतीपनि विवेकशील प्राणीको गुण बाँचेको छ भने आफूलाई प्रमाणिक गर्नु होस्। यस्तो बैरीले खुवाको विशालू गाँस थाहा पाऊँदा पाऊँदै पनि आफूलाई मेट्न नलाग्नुहोस्।
अन्तमा केही थप् प्रश्न हरु…
मेरो गाउँमा नेवार, लिम्बु, राई, तामङ, भोटे, छेत्री, बाहुन सङै विश्वकर्महरु मिलाएर लग्भग ८० घर जती छ… दु:ख-सुख परे सबै भन्दा पहिले यै गाउँ समाज अघी आऊँछ। यो द्रिश्य मेरो गाउँको मात्र होइन, समस्त पहाडको हो।
अब के यो डिवेलपमेन्ट बोर्डले मेरो गाउँमा पक्का सडक दिन्छ त? के यो डिवेलपमेन्ट बोर्डले मेरो गाउँको भाई-बहिनीहरु पढ्ने एउटा उच्चस्थरिय विध्यालय दिन्छ त?? के यो डिवेलपमेन्ट बोर्डले मेरो गाउँको छिमेकीलाई दु:ख-बिमार हुँदा सामान्य स्वास्थ सेवा सम्म दिन सक्ने स्वस्थ सेवा केन्द्र दिन्छ त?? के यो डिवेलपमेन्ट बोर्डले मेरो गाउँको सुक्खा भएको पानीको नलमा पिउने पानी दिन सक्छ र ? सबै भन्दा ठुलो कुरा, के यो डिवेलपमेन्ट बोर्डले तल सुकुना काटे पछी कसैले तिमी को हो भनेर सोध्दा, गर्व साथ “म यो हो” भन्ने चिनारी दिन सक्छ र ?
सक्दैन भने कुन डिवेलपमेन्ट को कुरा गर्नु हुँदैछ ? किन यत्ति स्वार्थी बन्नु हुँदैछ ?
के यो स्वार्थपूर्ण सोँच होइन र ?
डिवेलपमेन्ट बोर्ड भनेको “मै खाउँ, मै लाउँ, सुख सयल मौज, मै गरौं” भनेको होइन र ?
सुन्ने गर्छु डिवेलपमेन्ट बोर्डले घर, पाईखाना आदी सहुलियत् हरु दिन्छ हरे… यो सहुलियत् कस्ले पाउछ ? भर्खर retire हुनु भको Subedar काका, जस्को पक्का घर, गाडी, र आजीवन पेन्श्न आउछ, वहाँले पाउछ कि पाउदैन ? वहाँपनि विश्वकर्म नै हो, त्यसैले वहाँले पनि पाउने अधिकार रहयो नि, होइन र ? यहाँ सामर्थयको कुरा नै छैन, जातको कुरा मात्रै आउँदैछ । जात नै यहाँ सहुलियत् को आधार बनिए पछी सामर्थयको त कुरै नगरौ ।
होइन यो त गरीब-दुखी, सामर्थ्य नभएको लागि भन्नु हुन्छ भने “गरीब डिवेलपमेन्ट बोर्ड” को माँग गर्नुहोस… किन यो जातको आधार मा ??
सामाजिक र आर्थिक विपन्नता भयो भन्दै विश्वकर्म डिवेलपमेन्ट बोर्डको माङ उठाउने मेरो दाजु-भाईहरु, के त्यो सामाजिक र आर्थिक विपन्नता हाम्रो जातमा मात्र छ र ? आज पहाड को समस्त गोर्खे जातीमा एउटा ठुलो जमात त्यो विपन्नताको चट्टारोमा छैन र ? म आफै विश्वकर्म भएकोले यो प्रश्न उठाउने म सित पूर्ण अधिकार के छ, विश्वकर्म जातको सबै परिवार त्यो सामाजिक र आर्थिक विपन्नतामा बाँचि रहेको छैन त ? छैन भने यो विश्वकर्म डिवेलपमेन्ट बोर्ड किन ? विपन्न विकास बोर्डको माङ गर्नुहोस । किन यो जात को आधार ?
हुनु त यो सबै कुरा मेरो पढेको-लेखेको जातलाई दोहोर्याउन्दै गरेको दाजु-भाईले बूझेको नै छन, तरपनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि सम्पूर्ण जातलाई नै बेच्न चम्केको छन् । पहाडमा विभिन्न डिवेलपमेन्ट बोर्डको घोष्णा गर्ने ममता ब्यानर्जीले बंगालमा विभिन्न बंगाली जातीको निम्ती डिवेलपमेन्ट बोर्डको घोष्णा किन गर्दैन? किन हाम्रो पहाड मा गर्छ? के बंगालको अन्य जातीहरु सबै विकशित् छन् त ? फुर्सत मा यसो मधेश् घुम्न जानुहोस, त्यहाँ हामी भन्दा अझै “socially and economically deprived” हरु धेरै छन्, तर त्यहाँ ममता ले डिवेलपमेन्ट बोर्ड बनाउदैन, हाम्रो पहाडमा मात्रै बनाउछ…
कारण त सबैले बूझेकै छ।
जात जातमा बाँटने योज्ना हो भन्ने सबैले जानेकै कुरा हो। जुन दिन हामी बेग्ला बेग्लै जातको हुन्छौं, त्यो दिन हामी गोर्खा रहँन्दैनौं भन्ने कुरा ममता ब्यानर्जीले बूझेको छ, तर हामी ले बूझ्न सकेनौं ! वहाँ बूझेरपनि गोर्खा संग सङै गोर्खाल्यान्डको चित माथि आफ्नो रोटी सेख्नु थालि सक्यो।
होशियार ! भविश्यले शराप्छ !
निवेदन: मेरो सबै विश्वकर्म दाजु-भाई, दिदी-बहिनीहरु यस्तै बिकाउ सोँच भकोहरु त छैनन् होला। वहाँहरुलाई मेरो विनम्र निवेदन, सक्नु हुन्छ (सक्नै पर्छ) भने यस्को विरोध गर्नुहोस, होइन भनेपनि समर्थन चाहिँ नगर्नु होला। साथै सकिन्छ भने यो मेरो गुनासो पत्र हरेक गोर्खे विश्वकर्मको घर-दैलोमा पुगोस।
GJM to observe Constitution Day Feel the peoples' pulse on Kalimpong issue: Chhetri
232,228 total views, 3,525 views today
261,752 total views, 3,526 views today
277,981 total views, 3,525 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 277,999 total views, 3,528 views today Comments comments
277,999 total views, 3,528 views today
277,920 total views, 3,524 views today